iOS 10.3.2 vs iOS 11, kumhanya bvunzo | IPhone nhau
Kubva munaJune 5 apfuura, vakomana vanobva kuCupertino vanotipa iyo yekutanga beta yeIOS 11, inotevera vhezheni yesisitimu yekushandisa yeApple nharembozha. Iko parizvino iri mubeta rekutanga, beta iyo yakanangana nevakagadziri chete, nekuti mashandiro ayo haasati akwenenzverwa zvakakwana kuti aipe muApple yeruzhinji beta chirongwa. Zvichienderana nemudziyo watinoisa, iOS 11 inoshanda neimwe nzira. PaPadad, pasina kuenda kure, mashandiro acho anonyanya kushanduka, zvakapesana chaizvo nezvinoitika neiyo iPhone.
Kana usiri mugadziri asi iwe uchifunga kuisa yekutanga beta nekuda kwezvitupa zvinotenderera paInternet kuti ukwanise kuzviita, zvingangodaro kutanga iwe unoda kuziva kana iko kumhanya kweshanduro nyowani yeIOS 11 yakakwira, yakaenzana kana kudzika pane iyo Apple iri kusaina parizvino, iOS 10.3.2.. Zvakare vakomana vanobva kuAppleBytes vaita enzaniso inoenderana matinogona kuona kuti ese ari mairi iPhone 6s uye iyo iPhone 6 zvinoita kuzvimhanya zvese zviri zviviri iOS 11 uye iOS 10.3.2.
Sezvataifunga, iOS 11 yekutanga beta inotora nguva yakareba kuti itange chishandiso, zvisinei kana isu tikatanga kuvhura mashandisiro ivo vanotora zvakanyanya kana zvishoma nguva yakafanana kuvhura, kunyangwe iine iOS 11 tinogona kuona imwe lag kubva patinodzvanya pane icon kusvika iko application yazovhurwa.
Uyu muedzo unongoratidzira chete Uye ichave iine zvishoma zvine chekuita neyekupedzisira mhedzisiro iyo inotevera vhezheni iyo Apple inotanga yeIOS 11 ichatipa isu, kunyanya neyokupedzisira vhezheni iyo ichavhurwa pakati paGunyana, zvinowirirana nekuratidzwa kweiyo iPhone 8, 7s kana sekupedzisira kutumidza gore rechiXNUMX iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » iOS 10.3.2 vs iOS 11, kumhanya bvunzo
Ini handizive, asi kwandiri yega yega vhezheni yeIOS inoita kunge inotora zvakapetwa kaviri kureba kutanga system apuro inofanira kugadzirisa iro dambudziko
Wistrom inosimbisa kushomeka kwemvura uye kuchaja zvisina waya kweiyo iPhone 8